ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com: BOOKS
Viber Ses Chat လေးပါ
Posted by Admin at Wednesday, May 31, 20170comments
Categories: BOOKS, PHOTOS, SEX CHAT
"မှန်ရာကိုထွက်ဆိုပါမည် " ပေါက်ကျော်မ
မီးဇာ စိတ်က အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းလှပါသည်။ ကိုစစ်အောင်နှင့် အိမ်နီးပါးချင်းဖြစ်သော်လည်း မီးဇာ ခေါ်ချင်မှခေါ်သည်။ ပြောချင်မှလည်း ပြောသည်။ သို့သော် နောင်လတ်နှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ ကိုစစ်အောင် မိတ္တူကူးစက်ဆိုင်သို့ မကူးချင်ပဲလဲ ကူးလျက်၊ မသွားချင်ပဲလဲ သွားလျက် မီးဇာ အောက်ကျို့ခံလျက် အောက်စီးမှ ဆက်ဆံလာရသည်။ ထိုသို့ အောက်စီးမှ ဝင်ရသည်က အသဲအသက်မက ချစ်ရလွန်းသူ- နောင်လတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်သည်။
နောင်လတ်က မီးဇာဟု ချစ်စနိုးခေါ်တတ်သော နောင်လတ်သည် ဇာနည်နွယ်ဟူသော မီးဇာနာမည်ရင်းကိုပင် ပျောက်အောင် မီးဇာကို လွှမ်းမိုးသူဖြစ်၏။ နောင်လတ်နှင့် (၁၀)တန်းမှာကတည်းက ချစ်ခဲ့ကြ
ကျနော်ရဲ့ မိဘတွေနှစ်ဦးစလုံးက အလုပ်လုပ်ကြတော့ တစ်နှစ်တာ ကျောင်းတက်လို့ ပြီးသွားရင် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်တိုင်း ကျနော်ကို မိဘများရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ ရွာကို ပြန်ပို့ထားကြတယ်လေ၊ ဒါကလည်း မိဘတွေ နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက်လုပ်တတ်တဲ့ ဓလေ့လေးတစ်ခုပါ၊ ရွာမှာက ကျနော်ရဲ့ အဖိုး၊ အဖွား၊ ကြီးတော်၊ အန်တီတို့နဲ့ ဝမ်းကွဲ ညီအကိုမောင်နှမတွေက အများကြီးဆိုတော့ ကျနော်လည်း ရွာကို သွားရတာ အတော်ပျော်ပါတယ်၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေက လမ်းတစ်လမ်းထဲမှာဆိုတော့ ကျနော်ရွာရောက်ရင် နေပျော်တဲ့ အိမ်မှာပဲ နေတာများတယ်၊ အဖိုးတို့ အိမ်မှာက အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်က ရှိနေတော့ အမြဲတမ်း အဆူခံနေရလို့ မပျော်ဘူးဗျာ၊ ခြေရင်းဖက်မှာလဲ ဘကြီးတို့လင်မယား၊ သူ့မိန်းမကြီးတော်က မျက်နှာကြီးက စူပုတ်ပုတ်၊ အဖိုးတို့ အိမ်ရှေ့မှာတော့ အပြိုကြီး တစ်ဖြစ်လည်း ကြီးတော်ကြီး
““ နာမှာကြောက်လို့ ”” (စ/ဆုံး)
အချစ်၏အစကို သူဝိုးတ၀ါးဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကဲ့သို့ အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားခဲ့သည်ကိုပင် သူမမှတ်မိတော့လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ရပ်ကွက်လုံး၏ သရဖူ အားကစားမယ်လေး““ရွယ်ရွယ်””နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်ကို သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက အံ့အောကြ၏။ သို့သော် ““ရွယ်””ကဲ့သို့ ချောမော နုပျိုတောင့်တင်းသော မိန်းကလေးကို မိုးကောင်းမှ ခွန်ဂျာ အဖေကလဲ သဘောတူခဲ့သည်။
နှစ်ယောက်စလုံး၏ သီးခြားကမ္ဘာလေးတစ်ခုကို ပူးပေါင်းတည် ဆောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။ လွတ်သောငါးသည် ကြီးလေ့ရှိပါသည်။ သူနှင့် လက်ထပ်ပြီး (၁)နှစ်ကျော်ကျော်မှာပင် ရွယ်ရွယ် ကွယ် လွန်သည်။ ရွယ်ရွယ် အသက်က ငယ် အရွယ်ကနု အရပ်ပု၍ ညှပ်ရိုးကျဉ်းသောကြောင့် ခလေးမမွေးနိုင် ပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ အရူးလိုပင် ဆောက်တည်ရာမရ လျောက် သွားသည်။ တောင်ကြီး အင်းလေး ပင်းဒယ ပုဂံ ညောင်ဦး အစုံပင်။ ရောက်လေရာ၌ ကင်မရာတစ်လုံးနှင့် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်သည်။ ရွယ်ရွယ်ကဲ့သို့ နုပျိုချောမောသမျှ စိတ် သဘော
Posted by Admin at Monday, May 29, 20170comments
မောင်မောင်……အရပ်က (၅)ပေ (၉)လက်မ၊ ရင်အုပ်ကားကားနှင့် ယောက်ျားပီသ ခန့်ညားသူ။ အသက် က(၂၇)နှစ်၊ ရန်ကုန်တွင် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သူ။ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသား……။ ဘာဆိုဘာမှ ပူပန်စရာမရှိ သူ။ မိဘများပေးပို့သော ငွေအလုံအလောက်နှင့် ဝါဿနာပါရာ ပန်းချီပညာကို လေ့လာလိုက်စားနေသူ…။ ပြဿနာ၏ အခြေခံက မောင်မောင်နေထိုင်ရာ ဘေးခန်းမှ ညီအစ်မ(၂)ယောက်ဖြစ်
အင့် .. အမေ့ .. ကျွတ် .. ကျွတ် .. ကောင်းကောင်း .. ကောင်းတယ်ကွယ် “ “နာ … နာလေးဆောင့် .. ဆောင့် … အင်း … ဟုတ်ပြီ .. အမေ့ .. ရှီး.. ကျွတ် … ကျွတ် .. ဟုတ်ပြီ .. “ “အင့် … အား … ဟင်း … အင်း .. မောင်လေး … မမ .. မမတော့ .. မင်း … မင်း လီးကြီးကို စွဲ .. စွဲသွားပြီကွာ .. အင့် .. ဟုတ်ပြီ … အင့် … “ ရမ္မက်သွေးတွေ ယှက်ဖြာနေသော မတင်ရီ မျက်နှာကြီးမှာ အလွန် စွဲမက်နှစ်သက်စရာ ကောင်းလှသည်။ ကာမရာဂပြင်းထန်လှသော မျက်နှာကို ကြည့်၍ ဂျစ်တူးစိတ်တွေ ပို၍ ပို၍ ပြင်းထန် တက်ကြွလာသည်။
သည်တော့ မာန်ဖီနေသော ကျားရိုင်းတစ်ကောင်ပမာ ဆောင့်ချက်တွေက ကြောက်ခမန်းလိလိ ပြင်းထန်လာသည်။ အချက်တစ်ရာခန် ဆောင့်ပြီးသောအခါ မတင်ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ကြိုးနှင့် အတုတ်ခံလိုက်ရသလို တင်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူမ လက်နှစ်ဖက်က ဂျစ်တူး လက်နှစ်ဖက်ကို တင်းနေအောင် ကုတ်ဖက်ထား၏။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး လေ
Facebook Messenger ကနေ Sex Chat လေးပါ
Posted by Admin at Sunday, May 07, 20170comments
ဟဲ့ ဝင်းနွယ်…..နင် အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ” နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး မှန်ရှေ့မှာ သူ့ကိုယ်လုံးကို လှည့်ပတ်ပြီးကြည့်နေရာကနေ သူ့နောက်ဖက် ကုတင်စောင်းမှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်နေသော သူနဲ့မတိမ်းမယိမ်းကောင်မလေးကို လှည့်၍ ကြည့်သည်။ “ ငါ ရှေ့လထဲမှာ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ…..နင်ရော မိသီ…..” “ ငါက လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ထဲက ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ….ငါက နင့်ထက် ကြီးတယ်….” “ နင်က အသက်ပဲကြီးမှာပေါ့….ကျန်တာတွေ ငါ့ကို မမှီပါဘူး ” နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ဆိုသော ကောင်မလေးက မိသီဆိုသော သီသီခိုင်ဆိုသည့် ကောင်မလေးကို မခံချင်အောင်စ၍ မှန်ထဲမှ သူမပုံရိပ်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဘရာစီယာ အနက်ရောင်လေးတစ်ထည်နှင့် စပ်စမိုင်နာအနက်ရောင်လေး တစ်ထည်သာရှိသည်။ ရှမ်းကပြားမို့ ဖြူဖွေးသော အသားအရည်နှင့် အနက်ရောက် ဘရာစီယာ နှင့် စပ်စမိုင်နာတို့က လိုက်ဖက်လှသည်သာမက အချိုးအစားလှပဖွံ့ထွားသော နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်လုံးအလှက
Posted by Admin at Saturday, May 06, 20170comments
တရုတ်မ .နှင့်. တောသား
ရန်ကုန်မြို့ ၄၅လမ်း.. အထည်လိပ်.တွေ ဖြန့်တဲ့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်က ဘယ်နားလဲ အကို ညီဟိုမှာ မြင်လား YMCA ဆိုတဲ့ တိုက်ကြီး ဟုတ်ကဲ့ အေးအဲ့ တိုက်ကြီးရှေ့ ကနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ကြီးက ညီပြောတဲ့ နေရာပဲ ဟုတ်ကဲ့ ကြေးဇူးပါပဲ အကို သီဟတစ်ယောက် တိုက်မျက်နှာစာတွင် ရပ်ထားသော ကားများကို ကြည့်ပီး အင်း..ကားတွေကတော့ အကောင်းစားကြီးတွေပဲ တိုက်အဝင်ဝ ရောက်သည်နှင့် ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ မသိဘူး ဟိုကားဒရိုင်ဘာလိုတယ်ဆိုလို့ လာလျှောက်တာပါ သြော် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်.ဒီမှာ ခဏထိုင်နော် သူဌေးကတော် သွားခေါ်ပေးမယ် မကြာလိုက်အသက် ၃၈ ၄၀ခန့်ရှိသော တရုတ်မ နှင့်တူသည် ပုံမှန် အဝတ်စားနှင့်ပင် ဆင်းလာလေသည်။ ကားမောင်းမယ် ဆိုတာ မင်းလား ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ အမ မင်းအသက် နဲ့ ယာဉ်မောင်းသက်လေး ကျွန်တော့ အသက် ၂၄ပါ ကားမောင်းတာ ၅နှစ်ကျော်ပါပြီ လိုင်စင်ကရော ရှိပါတယ် အနက်ပါ.. အဲ့တာဆို မောင်းတာလေး တစ်ချက်ကြည့်ုလို့ ရမလား အဲ့ Town ace နဲ့ စမ်းကြည့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ကားနှင့် ထိုအမ မောင်းခိုင်းသော နေရာ တွေ မောင်းပြီး ပြန်ရောက် လာတော့ ဘယ်လိုလဲ မိန်းမ ယာဉ်မောင်းအသစ် အဆင်ပြေရဲ့လား အဆင်ပြေတယ် ကျွမ်းကြင် အဆင့်ထဲကပါပဲ လာ ထိုင် မင်းနာမည် က သီဟပါ အမ မင်းအသံက တောသားသံပေါက်နေတယ် ဘယ်ဇာတိလဲ ပဲခူးကပါ လစာရော
Posted by Admin at Friday, May 05, 20170comments
" မမကို အရမ်းချစ်တာဘဲ "
" မမကို အရမ်းချစ်တာဘဲ " " အော်.. မောင်လေးရယ် မမလဲ မောင်လေးကို အရမ်းချစ်တယ် သိလား " " တကယ်နော် " " အော်.. မောင်လေးရယ် တကယ်မို့လို့ မောင်လေးကို မမရဲ့ တကိုယ်လုံး လိုရာသုံးဖို့ ပုံအပ်ထားတာ ပေါ့ကွယ်.. " " ဒါပေမယ့်.. မမရယ် " " မောင်လေးလေ.. အခုလို တပတ်တခါလိုးရတာကို အားမရဘူးသိလား.. မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အမြဲ တမ်းလိုးချင်နေတာသိလား " " ဖြစ်လာမှာပေါ့ မောင်လေးရယ်.. အခုလည်း တပတ်တခါမကတော့ဘူး.. မောင်လေးလိုးချင်တဲ့ အချိန်တိုင်း မမအမြဲတမ်း အလိုးခံနေတာဘဲ မဟုတ်ဘူးလား " " မမရဲ့ဟောဒီ ချစ်ချင်စရာ ညှစ်ချင်စရာ ကိုယ်ခန္ဓာနူးညံ့အိကြီးနဲ့ လိုးချင်စရာ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလေ မောင်လေးက အမြဲတမ်းချစ်ချင် ညှစ်ချင် လိုးချင်နေတာ သိလား..၊ အခုတောင်မှ ထပ်ပြီးလိုးချင်လာပြန်ပြီ " " ဟုတ်လို့လား မောင်လေးရာ.. မမမှာဖြင့် မောင်လေးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလိုးထားလို့ စောက်ဖုတ်ကြီး တောင် ကျိန်းနေပြီ.. " " အော်.. မမရယ် မောင်လေးဖြင့် ဟောဒီမမစောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးလို့မ၀သေးဘူး.. မယုံရင် မောင်လေးလီးကို မမကိုင်ကြည့်ပါလား.. " " အိုး.. ဟုတ်ပါရဲ့ မောင်လေးရာ.. မောင်လေးလီးကြီးက ထောင်ထနေတာလွန်ရောပဲ " " အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ မမရဲ့.. မမကိုတွေ့ရင် မောင်လေးတင်မကဘူး.. မမကို တွေ့တဲ့သူတွေ ဒိပြင် လူတွေကပါ ဖြုတ်ချင်နေတာ.. သိလား " " အဲဒါတော့ ပိုပြီကွယ် " " မပိုပါဘူး မရယ်.. မောင်လေးသူငယ်ချင်းတွေကဆိုရင် မင်းမမကို တခါလောက်ဆွဲရရင် ကောင်းမှာဘဲ လို့တောင် ပြောကြတယ် " " မင်းကလျှောက်ပြောတယ်ပေါ့လေ ကောင်စုတ်လေး " " အော်.. မမရယ် မမကိုလိုးခွင့်ရတာကိုက မောင်လေးအတွက် အခွင့်ထူးပဲလေ..
နေ့စဉ်ဆိုသလို ဦးတင်ဝင်းနဲ့ ကျော်ကျော်ဝင်းတို့ အရက်ဝိုင်း ဖြစ်ခဲ့၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ
အရေးကြီး၍ ကျော်ကျော်ဝင်း အိမ်ပြန်ညဉ့်နက်သောနေ့များမှလွဲ၍ သူတို့နှစ်ဦး ဆုံ၍
မို့မို့ထွန်းကလည်း ညစဉ်ဆိုသလို ဦးတင်ဝင်း၏ အခန်းဘက်သို့ တီဗီ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရန် သွားရင်း
ဦးတင်ဝင်း၏ အလိုးကို ညစဉ်အလိုးခံ၏။ ဦးတင်ဝင်းထံ မသွားမီ ညားကာစ ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်း
လိုးသည်ကိုလည်း အလိုးခံခဲ့သေးသည်။ ညစဉ်ညတိုင်း ယောက်ျားနှစ်ယောက် အလိုးကိုခံ၍ မို့မို့ထွန်းသည်
ကာမစည်းစိမ် ခံစားနေသည်မှာ (၁၀) ရက်ခန့်ပင် ရှိပြီဖြစ်သည်။
သူတို့နှစ်ဦး အရက်ဝိုင်းပြီးလျှင် ညစာစားရန် အတွက် ကာမအားကိုဖြစ်စေမည့် ဟင်းများ၊ ဓါတ်စာများ၊
စားကောင်းသောက်ဖွယ်များကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်အောင် စီမံချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးရသည်မှာ
မို့မို့ထွန်းတစ်ယောက် မမောနိုင်မပန်းနိုင်းဖြင့် ကြည်နူးနေသည်။
လီးကြီး၍ အလိုးကောင်းပြီး အထာကျွမ်းကာ ဗလကောင်းသည့် ဦးတင်ဝင်းကို မိမိ၏ ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်းထက် ပိုမို စွဲလမ်းမြတ်နိုးမိ၏။ ချစ်မိ၏။ မနက်အိပ်ရာမှ ထလျှင် ရေမိုးချိုး ပြင်ဆင်ပြီး ချစ်လင်ဖြစ်သူနှင့် အပြင်သွားကာ မုန့်စား၏။
လက်ဘက်ရည်သောက်ကြ၏။ ပြီးလျှင် ချစ်လင်ဖြစ်သူ ကျော်ကျော်ဝင်းမှာ ကားပွဲစားတန်းသို့ တစ်ခါတည်း
တန်းသွား၏။ မို့မို့ထွန်းမှာ ဈေးသို့ တစ်ပါတည်း ဆက်သွားကာ ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်၍ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၏။
နံနက်စာကို ကျော်ကျော်ဝင်းက ပြန်မစားပါ။ အပြင်တွင်သာ ကြုံသလို စား၏။ ညနေပြန်လာမှသာ အိမ်တွင်ညနေစာ စားသည်။
ဒီနေ့လည်း မို့မို့ထွန်းတစ်ယောက် ဈေးမှပြန်လာပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၏။ ပြီးတော့ရေတစ်ခါ ထပ်ချိုးကာ အလှပြင်ပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ထိုင်၍ ကက်ဆက်နားထောင်ကာ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို
ဖတ်နေသည်။ မည်မျှကြာသွားသည် မသိ။ ဗိုက်ဆာလာ၍ နာရီကြည့်လိုက်မှ နေ့လည် (၁၂) နာရီ ရှိပြီ
ဖြစ်၍ နံနက်စာ ထည့်ကာ စားလိုက်သည်။ တစ်ဖက်ခန်းမှ ဦးတင်ဝင်းကတော့ ရုံးသွားနေပြီ ဖြစ်၏။
နံနက်စာ ထမင်းစားပြီးနောက် ခေတ္တ ခဏ ထိုင်နေပြီး မျက်လုံးစင်းလာသဖြင့် အိပ်ခန်းအတွင်းမှ
ခေါင်းအုံးဝင်ယူကာ အိမ်ရှေ့တွင် ဖျာလေးခင်းပြီး လဲလျောင်းကာ အိပ်လိုက်၏။
အိမ်ရှေ့မှ တစ်စုံတစ်ယောက်က မိမိ၏ အမည်ကို ခေါ်သံကြားမှ နိုးလာကာ လူးလဲထထိုင်လိုက်ပြီး
အိမ်ရှေ့သို့ ကြည့်လိုက်ရာ မိမိယောက်ျား၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ၊ မိမိယောက်ျားနှင့် စပ်တူ
ကားဝယ်ရောင်းလုပ်နေသည့် ကိုဇော်မင်းဆိုသူကို တွေ့ရ၍ တံခါးဖွင့်ပေးရန် ကပျာကယာ ထ၍ ထမီကို
ဖြန့်ဝတ်လိုက်သည်။ အလျင်စလို ဝတ်လိုက်မှုကြောင့် သူမ၏ ဗိုက်သား ဝင်းဝင်းလေးမှာစောက်ဖုတ်အပေါ်နား ဆီးစပ်ရှိ စောက်မွှေးနက်နက်လေးများအထိ ပေါ်သွားသည်ကို သတိမထားမိလိုက်ပါ။
ထို့ပြင် ရင်စေ့ ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေး၏ အပေါ်နှိပ်ကျယ်သီးလေးပြုတ်ကာ ရင်သားနှစ်မွှာ၏
အပေါ်ပိုင်းများမှာ ဝင်းစက်စွာ ပေါ်နေသည်ကိုလည်း သတိမပြုမိဘဲ
“ အစ်ကိုကြီး ဘယ်က လှည့်လာတာလဲ….”
“ ငါ ..ဟိုဖက်နား ကားလာကြည့်ရင်းနဲ့ လှည့်ဝင်လာတာ၊ နင့်ယောက်ျားတော့ ငါ အင်းစိန်ဘက်
လွှတ်လိုက်တယ်၊ အပြန်မိုးချုပ်လိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ် ”
“ ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး၊ ကော်ဖီသောက်ဦးလေ၊ ဖျော်လိုက်မယ်…”
“ ကော်ဖီ မလုပ်နဲ့ဟာ၊ သံပုရာရည် ရှိရင် လုပ်ပေးပါဟာ ”
“ ဟုတ်ကဲ့….ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး ”
မို့မို့ထွန်းသည် ပျာယာခတ်နေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုဇော်မင်းသည် သူမ၏ ယောက်ျားကို
ကားပွဲစားလောကထဲ ခေါ်၍ ဝင်ငွေကောင်းပြီး အလုပ်ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ပြပေး၏။ ပြီးတော့ သူနှင့် လည်း
အတူတွဲဖက်၍ ပွဲစားလုပ်စေ၏။ သူမတို့ လိုသလောက်ငွေကိုလည်း အချိန်မရွေး ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည့်အချက်ကတော့ မို့မို့ထွန်းသည် ကျော်ကျော်ဝင်းနှင့် မယူမီက
ရည်းစားတစ်ယောက် ထားခဲ့ဘူးသည်။ မို့မို့ထွန်း၏ ကြောက်လန့်၍ လက်သင့်မခံ ငြင်းပယ်မှုကြောင့်
ဒါပေမယ့် တည်းခိုခန်းသို့ အသွားအပြန် တက္ကစီငှားခဲ့ရာ ယင်းတက္ကစီကားကို ထိုစဉ်က မောင်းသူမှာ
ကိုဇော်မင်းဖြစ်၏။ မို့မို့ထွန်းမှာ ကိုဇော်မင်းကို မမှတ်မိ။ ကိုဇော်မင်းက သူမ ကျော်ကျော်ဝင်းနှင့်
အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လခန့်အကြာကမှ မူးမူးနှင့် ပြန်ပြောပြ၍ ကိုဇော်မင်းမှန်း သိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်ယောက်ချင်း ပြောရ၍ တော်သေး၏။ နင့်ယောက်ျားကို ငါ
Posted by Admin at Thursday, May 04, 20170comments
မို့မို့… ဒီလူကြီးကို ကြည့်လို့မရ..။ မျက်နှာကြောကို မတည့်..။ လူကောင်ကြီးက ကြီးသလောက် စကားသံက ချွဲချွဲနဲ့ …။ သူ့နာမည်က မျိုးဝင်းသူတဲ့…။ မမခင်သီတာကလည်း တစ်မျိုး..။ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်း မသိ..။ မို့မို့ မျက်နှာကြောမတည့်သော လူကြီးက မမနှင့် အိမ်မှာ အတူလာနေမယ် တဲ့…။ မမ ယောက်ျားယူမှာလားလို့ မေးတော့… “ မို့မို့..နားမလည်သေးပါဘူး ညီမလေးရယ်…” တဲ့..။ ပြီးတော့ မို့မို့ ငယ်သေးတယ် တဲ့..။ မို့မို့ မငယ်တော့ဘူးလို့ ပြန်ပြောချင်လိုက်တာ … မပြောရဲလို့..။ မို့မို့ အသက် (--) နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီ..။ အပျိုဖြစ်တာတောင် -- နှစ်ကျော်နေပြီ..။ အဲဒီလူကြီးက ဘယ်လောက်ကြာအောင် လာနေမှာလဲ လို့မေးတော့ မသိသေးဘူးတဲ့..။ ကောင်းရော…ရှင်..။ အရင်တုန်းက အဲဒီလူကြီး အိမ်ကို ခဏခဏလာဘူးတယ်..။ မို့မို့ကို ဆက်ဆံတာ သူငယ်နှပ်စားလေးလို ဆက်ဆံသလိုဘဲ..။ မကြိုက်ပါဘူး…။ ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်..။ လူကိုကြည့်ရင် မျက်နှာကို ကြည့်ပေါ့..။ အခုတော့ ..သူက ဒီလို မဟုတ်ဘူး..။ မို့မို့ တစ်ကိုယ်လုံးကို အရမ်းစိတ်ဝင်စား(အရမ်းနှာဗူးထ ) နေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကြီးနဲ့ ကြည့်တတ်တာ..။ အဲဒီအချိန်မျိုးဆို…မို့မို့ နေလို့အရမ်းခက်တာ..။ သူ့ရှေ့မှာ လူတစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်တွေ မပါတော့သလိုပဲ..။ မျက်နှာတွေ ထူပူ ၊ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရှိန်းဖိန်းလို့…။ နှာဗူး…ကြီး..။ ကဲ..အဲဒီလို လူကြီးက အိမ်မှာလာနေမယ်တဲ့..။ မို့မို့သိပါတယ်..။ ဒီလူကြီး အိမ်မှာလာနေရင် မမနဲ့ အတူတူ အိပ်မယ်ဆိုတာကိုလေ…။ မို့မို့ စိတ်ညစ်တယ်..။ မမကိုလည်း မပြောရဲဘူး..။ မမ ခင်သီတာက မို့မို့ရဲ့ အစ်မအရင်းခေါက်ခေါက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ဝမ်းကွဲ အစ်မ..။ ပြီးတော့ မို့မို့ကို မိဘလို စောင့်ရှောက်လာခဲ့သူ..။ မို့မို့ (၄) နှစ်သမီးလောက်က မို့ အဖေနဲ့ အမေ ၊ နောက်… မမခင်သီတာရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ၊ မမရဲ့ အစ်ကို .. သူတို့အားလုံး တွံတေးတူးမြောင်းထဲမှာ သင်္ဘောနစ်တဲ့ ထဲ ပါသွားကြသည်..။ အဲဒီနောက် မို့မို့ကို မမခင်သီတာက ပြုစုပျိုးထောင် လာခဲ့၇သည်..။ ဒီတော့ မို့မို့က မမခင်သီတာကို မလှန်ရဲတာလည်း မဆန်းပေ..။ အဲဒီ မျိုးဝင်းသူ ဆိုတဲ့ လူကြီး အိမ်မှာလာနေရင်..ဘယ်လို ဆက်ပြီး စခန်းသွားရပါ့မလဲ ဟူသော အတွေးတွေက မို့မို့ စိတ်တွေကို ညစ်နွမ်းစေလေသည်..။ အစိမ်းရောင် မီးလုံးလေးက ဖိုက်ဝပ်လေးပဲ ဖြစ်ပေမယ့် အမှောင်ကြီးစိုးမှုကြောင့် အခန်းထဲတွင် လင်းလင်းထိန်ထိန် ဖြစ်နေသည်..။ မျိုးဝင်းသူက ခင်သီတာ၏ အင်္ကျီကျယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ရင်း အိပ်ရာပေါ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသော ခင်သီတာ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည်..။ ခင်သီတာမှာ ရှက်ရံွ့ အားနာသော မျက်နှာလေးဖြင့် မျိုးဝင်းသူကို ကြည့်ရင်း…
Posted by Admin at Tuesday, May 02, 20170comments
ကျွန်တော်၏ အလုပ်မှာ မမသန့်တို့ ဖွင့်ထားသော အိမ်ဆိုင်လေးကို နေ့စဉ် မုန့် ပို့ပေးရပါသည်. မိဘတွေခြင်းလည်း ရင်းနှီးကြသော ဒီနှစ်အိမ်တွင် ကျွန်တော့်အတွက် မမသန့် တို့မိသားစုနဲ့စားအိမ်သောက်အိမ်ပဲပေါ့ . အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော အပြုံးပိုင်ရှင်နှင့် စကားပြောဖြစ်ရင် ပိုပျော်သလိုပါပဲ.စိတ်မကောင်းစရာတခုကတော့မမသန့်ဟာ ဆေးသမားယောကျာ်းနဲ့ အပြီးကွဲကွာထားတည့် တစ်ခုလပ်မိန်းမပျိုပေါ့. ကျွန်တော်အသက်(၂၈) မမက (၃၅). မမ အိမ်ထောင်ပျက်သွားတာ (၃)ကျော်အချိန် တနေ့မှာပေါ့ လေ. ပို့ နေကြ မုန့်တွေနဲ့ မမသန့် တို့ အိမ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဟာ လူတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရသော အခက်ကျုံနေရသည်. အပေါ့ သွားချင်စိတ်ဖြစ်လာသော ကျွန်တော် နောက်ဖေးသို့ သွားခိုက် မထင်မှတ်ပဲ ညည်းသံသဲ့ သဲ့ ကို ကြားမိလိုက်သည်. မိန်းမတစ်ယောက်၏ အသံ(သို့ ) မမသန့်၏အသံ. ရပ်တန့် သွားသော ခြေထောက်သည် အလိုလို အခန်းဘေးသို့ကပ်မိသွားသည်.ဟနေသော သုံးထပ်သားကြားမှ မြင်လိုက်မိသည်က မမသန့်၏ နံရံမှီထားသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လှုပ်ရှားနေသော လက်အစုံ, သေချာကြည့်လိုက်တော့ မမသန့် သူ့မိန်းမ အင်္ဂါကို ခရမ်းသီးနဲ့ 
Oral Sex မရှောင်နိုင်ရင်တော့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို သိထားရပါ့မယ် Oral Sex
Oral Sex မရှောင်နိုင်ရင်တော့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို သိထားရပါ့မယ် Oral Sex ဆိုတာက လူတဦးရဲ့ ပါးစပ်၊ သွား၊ လျှာ ၊ လည်ချောင်းတွေနဲ့ လူတဦးရဲ့ လိင်အင်္ဂါတို့ ထိ တွေ့ ဆက်ဆံမှု ဖြစ်ပါတယ်။ Oral Sex ကို လိင်ဆက်ဆံဖို့ တက်ကြွ စိတ်ပြင်းပြသူတွေက လုပ်ဆောင် လေ့ရှိ ကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း တော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ တွင်ကျယ်တဲ့ ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံမှု ဓလေ့ တခုအဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Oral Sex က အကာကွယ်မဲ့တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု တွေ ထက် တော့
မွေးပြီး အ၀စား လင်ပါသား ( ၁ )
မေမေလေးရေသားကျောင်းပြန်လာပြီ.. ရာဇာကျော်ကား ကျောင်းပြန်လာတာနဲ့ လွယ်အိတ်ကိုပစ်ချပြီး ဇာခြည်ဝင်းရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လိုက်သည်..။ ဇာခြည်ဝင်းကား ရာဇာကျော်၏ ပါးလေးများကို တရှုံ့ရှုံ့နမ်းလိုက်သည်။ ရာဇာကျော်ကား(၁၈)နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသော်လည်း လူကောင်ကြီးကထွားကြိုင်းလှသည်။ ကောင်လေးကား(၁၀)တန်းသို့ရောက်နေပြီ။ ကလေးစိတ်မပျောက်သေး။ ဧည့်ခန်းတွင် ဇာခြည်ဝင်းနှင့် သူမသူငယ်ချင်း ကေသီထွန်းသို့ စကားပြောနေတာကို သူမရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လာသည်...။ ကဲ..ထမင်းစားလိုက်ဦး.။ သားကြိုက်တဲ့ပုစွန်ထုပ်ချက်ထားတယ်။ အေးမရေ သားဖို့ ထမင်းပြင်ထားပြီးပြီလား။ နောက်ခန်းမအေးမနှင့် ထမင်းချက်ဒေါ်ကြီးစိုးမှ ပြင်ထားပြီးပါပြီရှင့်မမလေး...။ ကဲ..သားသွားစားတော့၊ ပြီးရင်မာမီသားကိုရေချိုးပေးမယ်ဟု ဆိုပြီးရာဇာကျော်ကို နောက်ခန်းသို့လွှတ်လိုက်သည်။ ကေသီထွန်းက ဇာခြည်ဝင်းကို အဓိပ္ပါယ်ပါသောမျက်လုံးများဖြင့် ပြုံးစိစိလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဘာလဲ.ကေသီရဲ့..ညဉ်းကလဲ..ဇာခြည်ဝင်းက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်မေးလိုက်သည်။. ကေသီထွန်းကအနားတိုးလာပြီး.. ဟင်းဟင်းဇာခြည်တို့ကတော့ ချစ်နေလိုက်တာ..လင်ပါတဲ့သားကို.သူ့သားကျနေတာပဲ.. သိတယ်နော်..မိဇာခြည်သိတယ်... ညည်းအကြောင်း...ခုချိန်ထိကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးတယ်ဆိုကတည်းက.. ကောင်လေးကလဲထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ သန်မဲ့ပုံလေး။ မဟုတ်ရပါဘူးဟယ်..ညဉ်းကလည်း..
သူမနာမည်ကညိုညိုအောင်။ လှတယ်။ မာနကြီးတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံး သူမကို အလှဆုံးလို့ ပြောကြတယ်။ သူမ ကမျက်နှာလှသလို ကိုယ်လုံးကလည်းအရမ်းသည်။ အရပ်က ၅ ပေ ၆ ခန့် အသားက နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ညိုပြီးစိုနေတယ်။ သူမရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အခုခတ်မိန်းကလေးတွေလို အတိုအပြတ် ဘောင်းဘီ လုံးဝမ၀တ်ခြင်းပင်။ အမြဲတမ်း မြန်မာဆန်ဆန်ထမီလေးနဲ့ နေလေ့ရှိသည်။ နောက်ရည်းစားလည်းမရှိသေး။ ယောက်ျားများနှင့်လည်း ကင်းကင်းနေလေ့ ရှိသောကြောင့် မာနရှင်မလေးလို့လည်း နာမည်ကြီးသေးသည်။ ညိုညိုအောင်က ယောက်ျားတွေကို အထင်မကြီးသည်မှာအကြောင်းရှိသည်။ သူမငယ်စဉ် အပျိုဖြစ်ခါစ ၁၃ နှစ်လောက်တွင် ကျောင်းမှအစည်းအဝေးရှိသောကြောင့်အိမ်သို့ပြန်လာရာ "အား အား ကိုကိုရေ တော်ပါတော့ ဒီမှာနာလှပြီ အဟင့်ဟင့်" ဟူသော တောင်းပန်သံများ သူမ အစ်မ၏ အခန်းမှ ရုတ်တရက်ထွက်လာသောအသံကိုကြားမိလိုက်ရာ ညိုညိုအောင်သည် တံခါးလေးကိုအသာဟကာ အထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်ရာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရလေသည်။ ကုတင်ပေါ်မှ ညိုညိုအောင်၏ အစ်မသည် ကိုယ်တုံးလုံနှင့်လှဲနေပြီး သူမတို့၏ ကားဒရိုင်ဘာ အောင်မောင်းက သူမအစ်မအပ်ါကိုတက်ခွပြီး
ခမ်းနားလှပသော အိမ်ကြီး၏ အရှင်သခင်ကတော့ “ဦးမော်ကြီး"ဆိုသူဖြစ်သည်။ အသက်လေးဆယ့်ငါးနှစ်လောက်မှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ကျလေသည်။ ယူထားသည့် မိန်းမကသူ့ထက် နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်လောက်ငယ်သည်။ ကောင်မလေးက ဆယ့်ကိုးနှစ်ထဲကို လပိုင်းလောက်သာရောက်သေးသည်။ အရပ်က ၅ ' ၇ "လောက်ရှိသည်။ ခါးသေးသေးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ထိန်းထားသော အိုးလေးမှာလုံးပြီး တင်းနေတော့ ယောက်ျားတိုင်း နှစ်ခါမကပြန်ကြည့်ရောက်အောင်ကို တပ်မက်စရာပါ။ ရှမ်းတရုတ်မလေးဆိုတော့ အသားအရေကလည်း ဖြူဝင်းပြီးစိုလဲ့နေသည်။ “နန်းသူဇာ"ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်း နန်းစံပြီး ချောမောလှပသည်။ သူမကို လိုက်သည့်ရွယ်တူကောင်လေးများကို စိတ်မဝင်စားပဲ “ဦးမော်"ကိုမှ ပြန်ချစ်မိသည်။ အချစ်ဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်လှသည်။ “နန်းသူဇာ"ကိုတိုင်ကလည်း ပိုက်ဆံချမ်းသာသည်။ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးဆိုတော့ မိဘများကလည်း အလိုလိုက်သည်။ “ဦးမော်"လို သူဌေးကြီးကို ယူလိုက်ခြင်းက ပစ္စည်း ဥစ္စာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်လို့ယူကြတာလို့လည်း အားလုံးက နားလည်ထားသည်လေ။ ကုမ္ပဏီက အလုပ်ကိစ္စတွေ ပြီးသွားတော့ အိမ်ကိုပဲ တန်းပြန်သည်။ ကားတွေက အရမ်းရှုပ်နေတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားသည်။ ကားကို ရပ်ထားပြီး အိမ်ထဲဝင်လိုက်တော့ ထုံစံအတိုင်းဇနီးချောလေးက သံပရာဖျော်ရည်ခွပ်ကလေးကိုင်ပြီး စောင့်နေရှာသည်။ “ဦးမော်" ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ကိစ္စတွေများနေလို့လား။ မဟုတ်ပါဘူး “နန်းသူဇာ"ရယ်။ လမ်းမှာ ကားတွေရှုပ်နေလို့ ပါ။ “ဦမော်"ရဲ့ ဇနီးချောလေး ဖျော်ပေးတဲ့ သံပုရာဖျော်ရည်သာက်လိုက်ရင် မပင်ပန်းတော့ပါဘူး။ ပေး..ပေး...“ဦးမော်"အရမ်းသောက်ချင်နေပြီ။ “နန်းသူဇာ"လှပသောမျက်စောင်းလေးချီလိုက်ပြီး...
ကျမဟာ အတန်းပညာလေးတက်လာသလို ယောကျာင်္းတွေကိုကိုင်တွယ်ရာမှာလဲကျွမ်းကျင်လာပါတယ်၊ သူတို.အကြောင်းနားမလည်ခင်ကတော့အရိုးခံနဲ.ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်...အခုတော့...သူတို.ဟာ ဘယ်လောက်ကလိမ်ကျတယ် ဆိုးသွမ်းယုတ်မာတယ်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးသိလာရတော့ ကျမရဲ.မွေးရာပါဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေသုံးလာရတာပေါ့။ သူတို.ကိုချိုတပ်ပြီး နာဖားကြိုးထိုးပေးတယ် ..ဒါတောင်အပြုံးမပျက်ကြပါဘူး ..ကျမနောက်တကောက်ကောက်ပဲ သူတို.ရဲ.သိက္ခာတောင် အားမနာတော့ပါဘူးရှင်။ ကျမကိုပထမဆုံးပန်းဦးလွှတ်တဲ့ ကျူရှင်ဆရာဟာ ကျမ ၉ တန်းအောင်ကြောင်းသိရတာနဲ. သူနဲ.တညအိပ်ဖို.တောင်းဆိုပါတယ် သူကတော့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ.လှည့်ပတ်တောင်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့အစရှိခဲ့တဲ့ကျမကို စာမေးပွဲအကြောင်းပြပြီး လိုးတာပါပဲ ကျမ မကြိုးစားရင်အောင်မလားစာမေးပွဲက ဒါကိုသူကအရှက်မရှိ အခွင့်ရေးယူခဲ့တယ်..ဒါပေမယ့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမရဲ.ချစ်သူ မြင့်မောင် ဆိုင်ရင်လဲ တစ်ကြိမ်မှာပျော်ပွဲစားအကြောင်းပြပြီး ကျမကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးတော့သူ.သူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းလိုးတာ ကြည့်နေတယ် ကျမ ကနောက်တွေ.တော့မေးကြည့်ပါတယ် ဒီခတ်မှာဒါတွေကမဆန်းပါဘူးတဲ့ မိန်းမဆိုတာအပေါက်ပါတော့ အချောင်းထဲ့ရမှာနိယာမပဲတဲ့ နောက်ကွယ်မှာသောင်းကျန်းလဲ သိရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီတော့သူ.ရှေ.မှာတင် ခင်တဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရတာပါတဲ့ ပိတ်ဆိုစရာမရှိပါဘူးတဲ့။ ကျမတွေ.တဲ့ယောကျာင်္တွေထဲမှာဖြင့် ပြတ်တဲ့လူမရှိပါဘူး ဒါနဲ.ကျမသူတို.ကို အပေးအယူသဘော နဲ.ဆက်ဆံဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ.ကျမမာယာသုံးလိုက်တော့